Senetarada oo kasoo horjestay in gudigii loo xil saaray xil ka qaadista gavanaha Nyeri – The Voice of Northeastern Kenya
Senetarada oo kasoo horjestay in gudigii loo xil saaray xil ka qaadista gavanaha Nyeri
Senetarada dalka ayaa ka soo horjestay mooshin ah in gudi 11 xubnood ka kooban in ay baaritano ku sameeyan eedeymaha loo soo jeediyay gavanaha Maamul goboleedka Nyeri Nderitu Gachagua.
Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii maanta la soo bandhigay guddi ka kooban 11 xubnood oo baaritaanno ku sameeya go’aankii xil ka qaadista wakiilada hoose ee countiga Nyeri ku sameeyeen madaxa maamul goboleedka Nyeri Nderitu Gachagua.
Seneterada ayaa waxa ay sheegen in aysan aqbali doonin in gudiga la soo xulay uu baaritano ku sameeyo gavanaha balse taas badalkeedana waxa ay dalbadeen in barasabkaasi uu qudhiisa ka soo hormuqdo aqalka si su’alo loo weydiiyo.
Seneteradan kasoo horjestay talaabadaasi lagu magacabaay gudigan oo ay hoggaaminaayen George Khaniri, Mutula Kilonzo Junior iyo Boni Khalwale ayaa waxa ay sheegen in gudigan si dhaqsa ah loo qiyaani karo islamarkaana talaabada ugu haboon ay noqoto oo kali ah in Mas’uulkaasi uu soo hor faristo aqalka.
Xildhibaannada baarlamaanka hoose ee Nyeri ayaa jimcadii isbuucii hore ansixiyay mooshin ka dhan ahaa Mr Gachagua oo uu xilkiisa ku waayay, kadib markii lagu eedeeyay in uusan si haboon u maareynin dhaqaale loogu tala galay maamulkiisa.
Nderitu Gachagua oo ku gacan seyray tallaabadaasi ayaa 2 maalmood ka hor tagay maxkamdda, si uu loollan u galiyo tallaabada ay ka qaadeen golaha wakiillada Nyeri, isagoo ku doodaya in aan la siinin fursad uu isku difaaco.
← Jubilee oo laga codsaday in faahfaahin ay ka bixiyan lacagaha ay u adegsanayan furitanka xisbiga Jubilee
Nin lagu tuhunsan yahay falal argagixiso oo gacanta booliska ku sii jiri doona →